IBorrasca Gloria: izici, imvelaphi kanye nemiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngesinye sezivunguvungu ezinamandla ezahlasela iSpain ngo-2020. Kumayelana isiphepho uGloria. Kungokokuqala kweziphepho ezinkulu ezengezwe ngonyaka odlule. Kunezizathu eziningi zokuthi kungani isikhumbuza i-DANA eyenzeka ngoSepthemba 2019. Inani lomonakalo oshiywe yileli squall kanye nomoya, iqhwa, imvula nokukhukhumala okukhulu kwenze ukuthi i-Gloria squall ibe ngomunye wezehlakalo ezimbi kakhulu.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, umsuka kanye nemiphumela yesiphepho uGloria.
1 Umsuka nezimbangela zesiphepho uGloria
2 Ngemuva kwesiphepho uGloria
3 Ukutadisha kwezimo ezimbi kakhulu
Umsuka nezimbangela zesiphepho uGloria
Kuyisiphepho sasebusika esinezimo zesimo sezulu esibi kakhulu ngenxa yomoya waso onamandla, imvula, iqhwa kanye namagagasi anamandla okudala. Ochwepheshe bezimo zezulu babikezela ukuthi lesi siphepho sizophula amanye amarekhodi kokunye kokuguquguquka okubaluleke kakhulu komkhathi okufundwe esivunguvungwini. Yize kubhekwa njengesiphepho esincane, besinodlame olukhulu.
Kuyisiphepho esihlanganisa ukuhlangana kwezimo ezimbi kakhulu ngenxa yenhlanganisela yomoya obandayo kuwo wonke amazinga e-troposphere. Siyakhumbula ukuthi i-troposphere ungqimba oluphansi kakhulu lomkhathi olucishe lube amakhilomitha ayi-10 futhi luqala ebusweni bomhlaba. Kukule ngxenye yomkhathi womhlaba lapho kwenzeka khona izimo zezulu. Inhlanganisela yomoya obandayo kuwo wonke amazinga we-troposphere nomswakama ovela eMedithera kwenza ukuwa kweqhwa kube nomusa kakhulu ezindaweni eziphakeme. Lesi siphepho siphinde sagqama ngenxa yesiphepho sasolwandle endaweni yaseMedithera yenhlonhlo naseziQhingini zaseBalearic.
Ukuze sazi kahle ukwakheka kwesiphepho uGloria kufanele siqale kusuka kuningi lomoya obandayo osenzile. Lo msindo womoya obandayo ezindaweni eziphakeme ezihlukene uhlangana ne-anticyclone yaseBritish Isles, okwenza phakathi kwawo kugeleze imimoya enamandla kakhulu. Laba bobabili bayahamba kuhambisana nezinguquko zengcindezi engazelelwe nomoya obanda kakhulu Baqhamuka engxenyeni esenyakatho yezwekazi. Amandla omoya nokwehluka kwezingcindezi kudala imvelaphi yeziphepho nokuwa okukhulu kweqhwa, ngisho nasezikhungweni eziphansi.
Into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi lolu hlobo lwezivunguvungu luvamile ebusika, kodwa into engajwayelekile kulesi simo ukuthi inodlame kakhulu. Ngokuyinhloko kungenxa ye-anticyclone eyeqile ngisho nemimoya ebandayo enamandla kakhulu. Zombili lezi zimo zithuthukiswa yisimo sezulu esivuna izakhi ezinamandla kakhulu ezingeni lesimo sezulu.
Ngemuva kwesiphepho uGloria
Konke kuqale ngoSepthemba 2019. Iziphepho zokuqala ezimbi zabonwa nge-DANA yonyaka we-2016. Izibikezelo zesikhathi esizayo ukuthi lezi zehlakalo zesimo sezulu zizoba namandla kakhulu. Akudingeki ukuthi kube ngenxa yokwanda okukhulu kwemvamisa, kepha ngamandla. Ngenxa yemiphumela engemihle yokuguquka kwesimo sezulu kumkhathi womhlaba, lezi zinhlobo zezimo zezulu ezimbi kakhulu zingenzeka ngamandla amakhulu.
Izexwayiso zesimo sezulu zaqala ukugcwala yonke imithombo yezindaba kwazise kwakukhona ukufa kwabantu abaningi kuyo yonke le ndawo kanye namakhulu ezinkulungwane zama-euro emonakalweni njengokulimala. Kube ngumonakalo odalwe ezitolo nasemadolobheni, ngaphezu kwemigwaqo nengqalasizinda emangaze kakhulu.
Lapho sibhekene nomonakalo omubi kakhulu njalo, abantu bayazibuza ukuthi ngabe lezi zimo zezulu zingadala umonakalo omkhulu yini. Asazi noma sikulungele yini ukubhekana nalomonakalo ongabangelwa yizimo zezulu ezimbi kakhulu ezilandelayo. Futhi yilokho kube yimicimbi emibili yesimo sezulu eqinile esikhathini esiyizinyanga eziyi-6. Akunemininingwane eminingi yokuthi imvamisa yezenzakalo zesimo sezulu esibi izokwehluka kanjani ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu. Ochwepheshe ngokwesiko bebekhathazekile ngezakhiwo nokwakhiwa okusondele kakhulu ogwini lolwandle ngenxa yokwesaba ukukhuphuka kwamazinga olwandle. Futhi ukuthi zonke lezi zinto kufanele zinakwe lapho uhlela insimu.
Uma idolobha lingakulungele ukwenza into enjalo, umonakalo ungaba mkhulu kakhulu futhi ungagwemeki ngokuphelele. Imininingwane ikhombisa ukuthi isiphepho singenzeka eminyakeni ezayo. Kepha kwaziwa okuncane, kepha kungabi yingozi kangako, sinesiphepho uGloria. Yize bekuyisiphepho esincane, kube nomonakalo ongalindelekile. I-DANA ikhombise imicimbi ethile engaba yinhlekelele enkulu.
Ukutadisha kwezimo ezimbi kakhulu
Kufanele kukhunjulwe ukuthi kufanele kube khona izifundo ezihlobene nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu esikhathini esizayo. Wonke umuntu Lezi zimo zezulu ezimbi kakhulu zenzeke kaningi emlandweni. Kodwa-ke, awulungiselelwe njalo ngemiphumela yako. Abanye ochwepheshe bathi banecala lokungazilungiseleli ngenxa yememori emfushane yesimo sezulu esinayo. Kufanele wazi ukuthi amarekhodi wesimo sezulu aqala ngonyaka we-1800 kuya phambili futhi awukho umlando wesimo sezulu ominyene kakhulu.
Lokhu kushoda kwedatha kungadala izinkinga ngokuzayo. Futhi ngukuthi, kufanele siphikelele ekutadisheni kahle imicimbi eyeqisayo ebilokhu ikhona. Umkhuba wukuthi ziya ziba namandla kakhulu futhi zingadala umonakalo omkhulu. Ngokunikezwe lokhu, amadolobha namadolobha kumele abe nezinhlelo zokulimaza ukuze zonke lezi zimo zezulu ezimbi kakhulu zinciphise umonakalo.
Ukuguquka kwesimo sezulu kuqala ngokukhuphuka kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba wonke. Uma amazinga okushisa eguquka, kuguqula konke ukuguquguquka kwesimo sezulu. Njengoba ukushisa okuningi kusesibhakabhakeni, amagesi amaningi abamba ukushisa aya ngokwanda usuku nosuku. Zonke lezi zinto eziguqukayo, yenza isimo sezulu sihluke ngokuphelele ngoshintsho olwenzeka kancane kancane, kepha ngokushesha nangokushesha. Uma singayimisi imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, isimo sizoshintsha kakhulu. Akunandaba noma ngabe umuntu unabuchwepheshe obungakanani, izinguquko kwesimo sezulu zenzeka ngendlela eshesha kakhulu nengalindelekile.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi uzivikele kulezi zivunguvungu ezilandelayo esingaba nazo. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesiphepho uGloria nezimpawu zaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » I-squall uGloria
Uhla lwezintaba zase-Arctic